उदयपुरका पत्रकारले कुन सर्तमा लिए त ल्यापटप ? यसरी विज्ञेप्ती निकालेर जानकारी गराए · Aawaj Nepal
उदयपुरका पत्रकारले कुन सर्तमा लिए त ल्यापटप ? यसरी विज्ञेप्ती निकालेर जानकारी गराए
काठमाडौं । उदयपुरका पत्रकारहरुले नगरपालिकाबाट ल्यापटप उपहारस्वरुप लिएको समाचार यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । नगरपालिकाबाट ल्यापटप उपहार लिएकोमा आलोचनाका स्वरहरु बढ्दै गएपछि जिल्लाका पत्रकारहरुले यसबारेमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
पत्रकारलाई ल्यापटप वितरण गर्न नगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड